Mareykanka oo cambaareeyey muddo kororsiga Soomaaliya
Antony Blinken, Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka
Muddo xileedka afarta sano ee ah ee madaxweynaha Soomaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa dhammaaday 8-da Febraayo, hase yeeshee waxa uu weli joogaa xafiiska sababo la xiriira is-mari waa daba dheeraaday oo kala dhaxeeya hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada federaalka, oo ku saabsan qabashada doorashooyinka.
12-kii April, Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa u codeeyey inuu laba sano ku daro muddo xileedka baarlamanka iyo dowladda, taasi oo soo gaabisay dadaallada la doonayo in lagu xaliyo is-mari waaga laguna qabto doorasho si deg deg ah. Hal maalin kadib Farmaajo ayaa saxiixay sharcigaas.
Beesha caalamka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa diidan kordhinta muddo xileedka, waxayna ugu yeereen inay halis weyn ku tahay nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya iyo deriskeeda, ayaga oo ka digaya in kooxda argagixisada ah ee Al-Shabab ay ka faa’iideysan karto tafaraaruqa ka dhasha. Mareykanka iyo xubnaha kale ee beesha caalamka waxay sidoo kale ka digeen in muddo kororsiga iyo is-mari waaga siyaasadeed ee kale ay caqabad ku noqon doonaan awoodda hoggaamiyayaasha Soomaalida ay ku dabooli karaan baahiyaha deg degga ah ee shacabka Soomaaliyeed.
“Waan caddeynay in dowladda Mareykanka aysan taageereyn muddo kordhin aan taageero ka haysan dhammaan saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya, sidoo kale Mareykanka ma taageerayo hanaan doorasho oo hal dhinac ah iyo kuwa is-barbar socda,” ayuu yiri xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken oo soo saaray war-saxaafadeed. “Ficilladan oo kale waxay noqon doonaan kuwa aad wax u kala qeybiya, oo waxyeeleeya hanaanka federaalka iyo isbeddelada siyaasadeed ee xudunta u ahaa horumarka Soomaaliya iyo saaxiibitinimada beesha caalamka, iyo qabashada doorashooyinka la ballan-qaaday ee ay sugayeen shacabka Soomaaliyeed.”
Blinken ayaa ka digay in Mareykanka uu soo rogi karo cunaqabateyno iyo xayiraado visa. Mareykanka ayaa sidoo kale dib u qiimeyn kara kaalmada uu siiyo Soomaaliya, oo ah dal aad ugu xiran kaalmada dibadeed marka ay noqoto baahiyaha aa-aasiga ah sida cunada, iyo tababarka iyo qalabeynta ciidamada amniga.
Xoghaye Blinken ayaa ugu baaqay hoggaamiyayaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay dib ugu laabtaan miiska wada-xaajoodka ayna haleen hab ay ku xaliyaan xasaradaha doorashada. “Waxaan ku boorineynaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan is-xakameynta ugu sarreysa ayna sii wadaan wada-hadalalda, kana fogaadaan tallaabooyin hal dhinac ah oo sii hurin kara xiisadaha, oo waxyeeleyn kara hanaanka iyo hay’adaha dimoqraadiga Soomaaliya.”